Aqalka sare Mareykanka oo meelmariyay dhaqaalihii ugu badnaa ka hor taga cudurka Covid 19. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Aqalka sare Mareykanka oo meelmariyay dhaqaalihii ugu badnaa ka hor taga cudurka...
Aqalka sare ee dalka Mareykanka ayaa u codeeyay oo meelmariyay dhaqaalihii ugu badnaa ee Mareykanka uu ansixiyo, lacagtaas oo looga gaashaamanayo waxyeelada ka dhalatay saameynta cudurka Covid 19.
Lacagtan oo gaareysa 1.9 tiriliyan oo ay taageereen 50 xubnood oo katirsan aqalka Senetka ee dalka Mareykanka ayaa haatan loosii gudin doonaa aqalka wakiilada , halkaas oo iyaguna la filayo inay ansixiyaan.
Lacagahan kabka ah ayaa waxaa u ololeynayay madaxweynaha dalka Mareykanka, Joe Biden haseyeeshee xisbiga Jamhuuriga ayaa cambaareeyay arrinkan iyagoona sheegay in lacagtu ay aad u badan tahay.
Muddo toddobaadya ah dalka Mareykanka waxaa ka taagaan dood la xiriirta tirada lacagta ay tahay in la siiyo dadka shaqo la’aanta ah ee dalka Mareykanka, taas oo xisbiga Dimuqraadiga dooda kadib ay oggolaadeen in laga dhimo 400 oo doollar oo laga dhigo 300 oo doollar toddobaadkiiba calaa qof.
Barnaamijkan loogu gargaarayo dadka shaqo la’aanta ayaa la sheegay in uu socon doonaa ilaa iyo horraanta bishan Sabtembar ee sanadkan 2021.
Barnaamijkan gargaarka ayaa sidookale waxaa kamid ah lacag dhan 1,400 oo doollar oo qofka la siinayo mar qura. Dhibaatada ka dhalatay xanuunka Corona ayaa waxaa dalka Mareykanka ugu dhintay 523 kun oo qof halka uu sidookale ku dhacay dad gaaraya 29 milyan.
Barnaamijkan loogu magac daray qorshaha badbaadada ayaa lacag dhan 350 bilyan oo doollar waxaa loo qoondeeyay dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose halka lacag dhan 130 bilyan na loo qoondeeyay iskoolada dalkaas.
Afartan iyo sagaal bilyan oo doollar oo kamid ah barnaamijkan gunti-giijiska ayaa sidookale wax looga qaban doonaa baaritaanada iyo cilmi-baarisra la xiriirta Corona halka 14 bilyan na lagu kharash gareyn doona bixinta tallaalka cudurka.
Lacag dhan 1,400 oo doollar ayaa durbaba la siin doonaa dadka uu soo galo dhaqaalaha badan.
Barnaamijkan uu meel mariyay aqalka sare ee Mareykanka ayaa sidookale waxaa kamid ah lacago deeq ah oo lasiin doona ganacsiyada yaryar iyo kuwa waaweyn oo ay kamid yihiin shirkadaha waaweyn ee uu saameyay xanuunka.
Tallaabadan ayaa loo arkaa inay culeyska ka qaadeyso shacab badan oo Mareykanka oo ay shaqo la’aan ku dhacday kadib markii uu bilawday xanuunka Covid 19.
Previous article Jabuuti oo shaacisay in ay heshay qeybtii ugu horreysay ee tallaalka Covid-19.
Next articleCiidamada Puntland oo maalintii 2aad howlgal ka dhan ah Al-Shabaab ka wada duleedka Boosaaso
Madaxtooyada is bedel ku Samaysay Warsaxafadedyada, ayada oo ka reebtay Madaxweynaha...
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa isbedel lama filaan ah ka sameysay hab qoraaleedka ay usoo saarto war-murtiyeedka madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday, Maxamed Cabdullahi Farmaajo. Villa Somalia ayaa shalay...
Al-shabaaboo soo bandhigtay caddeyn muujineysa qaabka ay ula wareegtay deganka...
Booliska London oo xiray dad lagu eedeeyay midab-takoorkii cayaartooyda madowga ah
Maraykanka oo soo afjaraya taageeradii uu siin jiray xulafadiisa dagaalka ka...
Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuda Falastiin oo dibadbax ballaaran ku joojiyay shaqada...